Nomad Base One Max: tayada ugu badan, awoodda ugu badan | IPhone News
louis padilla | 16/05/2022 18:56 | Qalabka IPhone, dhowr
Waan tijaabinay Meesha ugu dallaca badan ee aad hadda heli karto, ee waxqabadka, naqshadeynta iyo tayada alaabta: Base One Max by Nomad.
Marka la qiimeynayo saldhigga dallacaadda waxaa jira cabbirro badan oo lagu xisaabtamayo: alaabta, naqshadeynta, dhammaynta iyo sifooyinka. Waa maxay barta ugu muhiimsan ee saldhiga dallacaadda? Awoodeeda waa muhiim, laakiin waxay kuxirantahay waxa aan raadineyno, waxaa jira qaybo kale oo xitaa ka sii badan kara watts-ka awoodda ay leedahay. Maanta waxaanu tijaabinay saldhiga cusub ee Base One Max oo laga keenay Nomad, kaas oo meel kasta oo aan ku eegno maadaama ay tahay mid aad u wanaagsan dhinac walba.
1 Awoodda ugu badan
2 laba ka wanaagsan mid
3 Aad u wanaagsan, laakiin aan sharaf lahayn
MagSafe waxa uu ahaa kacaanka iPhone in kasta oo ay fududahay, ama laga yaabee inay sabab u tahay. Magnet-ka lagu daray iPhone-ka iyo kiisaska ku habboon waxa u qaatay soosaarayaasha fursad ay ku bixiyaan nashqado cusub iyo fursado cusub si ay u abuuraan nidaamyo dallacaad oo raaxo leh oo la taaban karo. Laakin yeynaan iloobin in magnet-ku yahay qayb ka mid ah MagSafe, tan iyo Nidaamkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad labanlaabto awoodda dallacaadda, kaas oo ka socda 7,5W ee hababka dhaqanka ilaa 15W haddii aan isticmaalno.
Si kastaba ha ahaatee, ilaa hadda wax soo saar aad u yar ayaa ku dhiiraday inay bixiyaan shahaadadan. "Waxaa loo sameeyay MagSafe" Kaas oo dammaanad qaadaya ma aha oo kaliya in uu jiro xajin birlabeed laakiin sidoo kale taas gaadho awoodda ugu badan ee dallacaadda 15W. Waxaad ka heli doontaa saldhigyo badan oo "MagSafe Compatible" laakiin aad iyo aad u yar "Made for MagSafe", sida Base One oo ka socda Nomad. Marka hore waxaad yeelan doontaa magnetka, kan labaadna magnetka iyo culeyska ugu badan ee suurtogalka ah.
laba ka wanaagsan mid
Nomad wuxuu markii ugu horeysay bilaabay Base One, kaas oo aan horeyba u falanqeynay halkan, haddana waxay ku dhiirratay Base One Max, kaas oo leh tayo isku mid ah oo isku mid ah iyo qaab isku mid ah ayaa noo ogolaanaya kaliya inaan ka faa'iidaysanno lacagta degdegga ah ee MagSafe ee iPhone-keena. laakiin sidoo kale waxay na siisaa meel aan ku dalacno Apple Watch. Dhammaan waxyaalahan oo dhan waxay ku yaalaan saldhig bir ah iyo muraayado leh dhamaystir wanaagsan oo daryeelaya xitaa faahfaahinta ugu yar. Waxay xitaa xisaabta ku darsadeen miisaanka saldhigga si ay u awoodaan inay ku dhejiyaan iPhone-kayaga si sahlan. Sababtoo ah magnet salku waa mid aad u xoog badan waxaa la siiyay culeys dhan 900 garaam, si aan hal gacan uga saarno iPhone-ka iyada oo aan saldhigga One Max dhaqaaqin hal millimitir. Faahfaahin muhiim ah: saxanka dallacaadda ayaa kor u kacaya dusha sare ee saldhigga, si iPhone-ku si fiican ugu habboon yahay, iyada oo aan loo eegin xajmiga moduleka kamaradda.
Halka MagSafe ay ku hareeraysan tahay muraayad, birta Apple Watch taagan, oo ku dhammaatay isla dhammaystirka anodized cawlan mugdiga ah ee inta kale, waxay ku xidhan tahay balaastiig jilicsan oo ka ilaalin doonta Apple Watch waxyeelada. Oo waxaas oo dhan waxay wataan hal fiilo USB-C ah oo ku xira xagga dambe. Uma baahnid inaad ku darto fiilooyinka, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad ku darto fiilada USB-C ugu yaraan 30W awoodda saldhigga u ah inuu shaqeeyo. Xajiyeyaasha hooseeya ma heli doontid kharash yar oo degdeg ah, waa in aysan si toos ah u shaqeyn doonin.
Aad u wanaagsan, laakiin aan sharaf lahayn
One Max Foundation waa mid aad u wanaagsan. IPhone-ka waxaa la dhigayaa ku dhawaad ​​kaligiis dusheeda sare ee saxanka dallacaadda iyadoo ay ugu wacan tahay magnetka xoogga badan ee nidaamka MagSafe, kaas oo aadan kaliya ku gaari karin raaxada isticmaalayaasha aan u baahnayn inuu ku wareego xabo ilaa uu ka helo booska saxda ah, laakiin sidoo kale oggolow meelaynta saxda ah sida waxa luminta tamarta qaabka kulaylka ayaa la yareeyaa inta suurtogalka ah. Tani waxay u oggolaanaysaa dallacaadda wax-ku-ool ah oo badan, iyo in iPhone-keena uu kuleyliyo inta ugu yar ee suurtogalka ah, taasina waxay ku dhammaataa inay aad ugu fiican tahay nolosha batteriga taleefankaaga.
Reer guuraa, si kastaba ha ahaatee, waxay aad ugu dhawaayeen maamuuska. Waana taas Dabaysha Apple Watch ma aha mid degdeg ah, Waa iska caadi. Laga soo bilaabo Taxanaha Apple Watch 7 waxaan ku leenahay dallacaadda degdega ah, kaliya qaabkaas oo kaliya oo leh fiilo gaar ah oo Apple ah. Tani waxay u oggolaanaysaa Apple Watch-kayaga inuu ku dallaco 0% ilaa 80% 45 daqiiqo gudahood. Taasna waxaan heli lahaa darajada ugu sareysa ee suurtogalka ah, iyo haddii ay sidoo kale ku dari lahaayeen deked kale oo USB-C ah si ay u awoodaan inay ku buuxiyaan qalab kale oo leh fiilada, waxay noqon lahayd jeexjeexyada keega.
Saldhigga cusub ee Nomad's Base One Max waa saldhigga lacag-bixinta ee ugu qaalisan ee aad hadda iibsan karto. Sannado fudud oo ka fog Apple's MagSafe Duo, waxay na siisaa isla 15W lacag degdeg ah oo loogu talagalay "Made for MagSafe" laakiin leh nashqad iyo qalab ka dhigaya saldhigga Apple u ekaan karo toy. Haddana qiimuhu waa isku mid. Waxaad ka iibsan kartaa Base One Max website-ka Nomad $149.95 (isku xirka) caddaan iyo madowba. Waxaan rajeyneynaa in dhawaan laga heli doono dukaamada kale sida Macnificos iyo Amazon.
Ku dhejiyay: May 16 ee 2022
Wax ka badalidii ugu dambeysay: May 16 ee 2022
Naqshad heer sare ah iyo agab
100% waafaqid MagSafe 15W
900 garaam oo miisaan ah
Charger Apple Watch joogto ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Nomad Base One Max: tayada ugu badan, awoodda ugu badan
Cusbooneysii IOS 15.5, watchOS 8.6, macOS 12.4 iyo tvOS 15.5 diyaar u ah in la soo dejiyo
Gurman wuxuu saadaaliyay ka-qaybgal badan iyo abka cusub ee iOS 16